Expert Semalt: Olee otú iji nyochaa arụ ọrụ SEO
Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa e-azụmahịa na-eche na ọkwa. Ha na-enyocha Google mgbe niilemaka ihe na-egosi na ọkwa ha na-akawanye mma. Mgbe ha hụrụ mgbanwe na nsonaazụ ọchụchọ, ha chere na haarụmọrụ nyocha search engine (SEO) arụghị arụ. N'ụzọ dị mwute, nke a abụghị eziokwu mgbe niile - cottonseed monitoring systems.
Frank Abagnale, Onye Nlekọta Ndị Nlekọta Ọrụ nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-akọwa ezigbo ihe ndị na-emetụta ogo na arụmọrụ gị.
Mkparita uka: Gini bu ozo?
Taa, asọmpi emeela ka ọ bụrụ ihe ndị ọzọndị asọmpi. Onye nwe ụlọ ọrụ ọ bụla na-azụ ahịa na-achọ ka saịtị ahụ wepụ ha ahịa ha ka ha wee nwee ike imeziwanye ahụ, nweta clicks ma meea ire. Otú ọ dị, ọtụtụ ajụjụ ọchụchọ na-ewepụ ihe ndị dị na nsonaazụ ọchụchọ ndị na-adọta uche site na nsonaazụ anụ ahụ na ịkwanyendepụta n'okpuru ibe.
Nhazi: Ònye bụ ogo?
Taa, a na-ahazi ọkwa dị oke iche iche ruo n'ókè nke na enwekwaghịzi onye ọ bụlaọkwa maka ọtụtụ nyocha. N'ụzọ bụ isi, onye na-eji ndepụta ya eme ihe ga-adị iche na ọkwa ị na-ahụ na mbadamba nkume gị ma ọ bụkọmputa. N'ihi nke a, ọ dịghị onye ọ bụla nwere ike ikwu n'eziokwu "Anyị na-ebute ụzọ na Google!"
N'ikpeazụ, a na-ahazi ọkwa na:
Ebe. Nke a bụ ihe kachasị emetụ n'ahụ nke na-emetụta mmegasị iche nke ọkwa.Mgbe engines ọchụchọ chọpụta ebe onye ọrụ site na iji mgbaàmà cell ma ọ bụ adreesị IP ngwaọrụ, ha na-enye nsonaazụ ọchụchọ ahaziri iche.
Ngwaọrụ. Ọdịdị na-apụta na smartphones abụghị otu ihe ahụ na-apụtana desktọọpụ ma ọ bụ mbadamba. Ngwaọrụ mkpanaka na-enweta njikọ n'ime ngwa. N'ihi ya, saịtị ndị nwere ahụmahụ ndị na-eji ekwentị mkparịta ụka eme ihe ga-ebuli elu..Ọ bụrụ naonye ahịa na-achọ ihe na iPhone, ihe ga-esi na ya pụta dị iche na ihe na-apụta na nsonaazụ desktọọpụ gị.
Akụkọ ihe mere eme. Oge ọ bụla ị banyere n'ime akaụntụ njinarị, engine searchnweta ohere ịchọta akụkọ ọchụchọ gị niile. Ihe atụ zuru okè bụ mgbe ị banyere n'ime akaụntụ Gmail gị na kọmpụta gị, nyocha ahụ na-abanye n'ime yaakaụntụ Google gị na ọchụchọ Google. A na - eji ozi a iji hazie nsonaazụ ọchụchọ nke pụtara na ngwaọrụ gị.
Nwee mmekọrịta mmadụ. Iji nyiwe dịka Twitter na Google, Google natara ohere zuru okena omume gị. Nke a na-akọwa ihe mere ụfọdụ ọdịnaya ma ọ bụ ndị enyi na-egosipụta na nsonaazụ ọchụchọ gị, ma anaghị egosipụta mgbe ọzọNdị mmadụ na - ebido ajụjụ ọchụchọ.
Demographics. Ngwá ọrụ ọchụchọ na-etinye onye ọ bụla ọrụ n'ime ìgwè mmadụ site na iji haomume gara aga iji nyefee mgbasa ozi ezubere iche.
Dabere na ihe ndị ekwuru n'elu, ị ghọtara ugbu a esi nweta nsonaazụ ọchụchọahaziri. Ihe ndị a na-enye nhụwa ihe mere ihe eji edepụta ọkwa na-eme ka ị nwetaghachi data maka onye na-azụ ahịa ọbụna mgbe ogo gịNgwaọrụ na-egosi na ị bụ ọkwa mbụ maka okwu bara uru gị. Olileanya nwere ike ghara ịhụ otu ihe si na ọgwụgwụ ha pụta nke pụtara naha agaghị azụta n'aka gị. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ngwá ọrụ mgbasa ozi dị n'usoro enweghị ike inye data ziri ezi iji nyere gị aka ịzụlite ego, mgbe ahụọ bụghị ngwá ọrụ a pụrụ ịdabere na ya iji gosipụta arụmọrụ.
Nnochite anya: Gini bu isiokwu iji họrọ?
Ndepụta rankings pụtara na ịhọrọ ahịrịokwu na isiokwu ndị ị ga - achọọkwa maka na ịkọ atụmatụ nke saịtị gị na ogo maka okwu ndị ahụ. Nkebi ahịrịokwu ị họọrọ nwere ike ịgbanwe ọdịdị nkearụmọrụ gị.
Ọtụtụ oge, ụlọ ọrụ na-achọta ọ dị mfe iji ahịrịokwu na isiokwu ha dị ugbu aogo maka itinye akara ma ọ bụ okwu ha na asọmpi ala. Nke a na - eme ka o yie ka ha ọrụ SEO enweghị ntụpọ ọbụna mgbeọ bụghị.
N'aka nke ọzọ, ibe nke ọ bụla nwere ike ịkwado maka ọtụtụ puku nkebi okwu nke dị ntakịrịachọ. Nke a dabeere n'echiche nke ọtụtụ mkpụrụokwu nke na-anọchite anya 1,5,15 ma ọ bụ 60 ọchụchọ kwa ọnwa nke niile gbakwunye iji ụgbọala okporo ụzọ tụnyereelu-uru Keywords na ị soro na gị ogo akụkọ. Ntughari isiokwu ndị ị na-ewere dị ka ọnụ ahịa dị elu na-eme ka i kpuo ìsì n'ihe nzuzo ahụnke nyocha ogologo oge.
Omume rụrụ arụ: Olee mgbe ọ dị n'usoro?
Ịdị elu na-adị mma ma na-emetụ. N'ihi ya, ịnwere ike ịchọ ọkacha mmasị gịKeywords ma chọpụta na ọ naghị ebute ụzọ ọzọ. Otú ọ dị, ị nwere ike inwe obi ụtọ dị ịtụnanya ịhụ na ọ bụ ọkwa na mbụ ọzọ ịchọrọ.